"Barcelona Waxay U Jabtay Luis Suarez Sidii Ay Real Madrid Ugu Darsatay Cristiano Ronaldo" | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha Maanta“Barcelona Waxay U Jabtay Luis Suarez Sidii Ay Real Madrid Ugu Darsatay Cristiano Ronaldo”
“Barcelona Waxay U Jabtay Luis Suarez Sidii Ay Real Madrid Ugu Darsatay Cristiano Ronaldo”
Weeraryahankii hore ee xulka qaranka Uruguay iyo kooxaha Manchester United, Atletico Madrid iyo Villarreal ee Diego Forlan ayaa sheegay in Barcelona ay u dhutinayso Luis Suarez oo xagaagii uga wareegay Atletico Madrid, isla markaana goolal badan u dhaliyey kooxdiisa cusub.
Suarez oo ay da’diisu tahay 34 jir ayay Barcelona xagaagii ku wargelisay in aanu ku jirin qorshahooda xili ciyaareedkan, waxaana arrintan khadka telefoonka kaga wargeliyey Ronald Koeman oo waqtigaas loo magacaabay tababaraha Barcelona.
Atletico Madrid oo ka faa’iidaysatay ayaa markiiba dalab ka gudbisay, waxaanay kula soo wareegtay lacag dhan £5.5 milyan oo Gini oo kaliya.
Suarez ayaa 26 ciyaarood oo uu u saftay Atletico Madrid waxa uu u dhaliyey 16 gool, iyadoo tartanka kabta dahabka ee gool-dhalintana ay ku loollamayaan Lionel Messi oo uu saddex gool ka dambeeyo.
Diego Forlan oo u warramay wakaaladda wararka ee AFP, ayaa wax laga weydiiyey sida Luis Suarez ay u tabtay Barcelona, waxaanu hoosta ka xariiqay in Barca ay samaysay qalad weyn markii ay fasaxday laacibkan, waxaanu yidhi: “Dabcan wuxuu ahaa qalad weyn.
“Isla markii ay Barcelona u sheegtay inuu iib yahay, waxaan ogaa inay qalad gelayso. Waxa aan ogahay oo dhan ma ahayn bandhiggiisa garoonka oo kaliya. Laakiin farriin ayaan u diray, waxaanan ku idhi: ‘Dhegayso, adigu ma tihid kii ugu horreeyey iyo kii ugu dambeeyey midna. Waa inaad sii ahaato qofka aad tahay. Ma aha inaad qof kale wax u muujiyo, laakiin waa inaad shaqadaada kasii waddo Atletico Madrid.
“Laakiin marka lagugu ciqaabo wax aanad adigu samaynin, marka aad wali qaab fiican ku jiro, si wanaagsan aad u ciyaari doonto, dabcan ujeedkaagu wuxuu noqonayaa inaad muujiyo in aad wali ciyaari karayso.”
Diego Forland waxa kale oo uu sheegay in Barcelona ay u jabtay Luis Suarez si la mid ah markii ay Real Madrid iibisay Cristiano Ronaldo, waxaanu yidhi: “Barcelona way tabaysaa Luis, si la mid ah markii Cristiano Ronaldo uu ka tegay Real Madrid.
“Kaliya ma ahayn in Cristiano Ronaldo uu tegay, balse waxa ka tegay mid ka mid ah xiddigihii ugu wanaagsanaa taariikhda kubadda cagta. Waxa uu ahaa 50 gool oo xili ciyaareed kasta ah oo ka tegay.
“Markaa, haddii aad iibinayso ciyaartoy sida Ronaldo ama Suarez oo kale ah, waa inaad ku beddesho laba ciyaartoy, waxaana wali jiraysa khatar sababtoo ah waa inay la qabsadaan.
“Isla markii uu Cristiano ka tegay, ma ahayn mid u fudud Real Madrid, Barcelona iyaduna waa sidii oo kale.”